Isebenzisa itekhnoloji yeRFID ukulawula ngokufanelekileyo iilinen zorhwebo okanye zabucala, iimpahla okanye iimethi, zokwenza uluhlu lweempahla kunye nokunciphisa impazamo yomntu kwiinkqubo zokuhlamba kunye neenkqubo zokuhlawula. I-Toptag inobudlelwane bexesha elide noHilton, Marriot.
Itekhnoloji yomsetyenzana ngaphandle kwamacingo iye yangumgangatho kwiminyhadala yomculo ogqwesileyo elizweni, kunye nabalandeli abanxibe ngokuziqhenya ngebhanti yabo ye-RFID unyaka wonke njengeebheji zembeko. I-Toptag ibibambisene neminyhadala emininzi enje ngeRio festival, i-SnowGlobe Music Festival njl.
Ngamava eminyaka ekuphuhlisweni kwezisombululo zolawulo lokufikelela ngokuqinileyo ukufikelela ngokwasemzimbeni nangokwengqiqo, iToptag ithembekile yimibutho noorhulumente ukubonelela ngokhuseleko kunye nezisombululo zokhuselo.
Iimpawu zeRFID zivumela iinkqubo ukuba zichonge izithuthi ukuba zichongwe ngombane ukusuka kwiimitha kude. Izithuthi zinokujongwa ngokuzenzekelayo, kunye nomthwalo ochongiweyo. Banokujongwa kwakhona emva kwakhona ngokulula. Ngoncedo lobuchwephesha, i-RFID inokubonelela ngendlela ethembekileyo yokuchonga uluhlu olubanzi lwezithuthi, ukuzibeka kwindawo ethile okanye kwindawo ethile kwindawo leyo, ekwasetyenziselwa ukujongana ne-ETC okanye ulawulo lokupaka.
Ukuphawula imfuyo nge-RFID kunokuba sisixhobo esibalulekileyo kwimpahla yomfama yokuchonga isilwanyana ngasinye kunye nemvelaphi yaso kunye nolwazi lonyango. Oogqirha bezilwanyana ngoku banyanzela ukuba zonke izilwanyana zasekhaya zilandelwe kusetyenziswa i-RFID ukuze zenze inkqubo yokuchonga izilwanyana zasekhaya ezilahlekileyo nezifunyenweyo.
I-RFID-on-metal transponders ingaba kuluhlu olubanzi lokulandelwa kweeasethi kunye nokusetyenziswa okubanzi kwemizi-mveliso. Ezona zicelo ziphambili kukulandelwa kweeasethi kwiiseva kunye neelaptops kumaziko eenkcukacha ze-IT, ukulawulwa kwemigangatho yokuvelisa imveliso kunye nokuvelisa, ukugcinwa kwemibhobho yeoyile kunye negesi, kunye neesilinda zegesi, ukulandelela izixhobo, ukulandelela izixhobo, kunye nolawulo lomgangatho wezixhobo zonyango.
Inkampani yethu yasekwa ngo-2008 kunye nee-ofisi ezimbini eziphambili ezibekwe eHong Kong naseShenzhen, China. Inkampani yethu isekwe liqela labantu abanomdla kunye nabayili abanorhwebo olunobutyebi beRFID kunye namava okwenza. Inkampani yethu eneemfuno ezahlukeneyo tags tag RFID kunye neelebhile iimilo ezahlukeneyo kunye nezinto. Iimpawu zethu zisusela kumaza asezantsi ukuya kwi-ultra-high frequency, ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo le-NFC, intlawulo yokuhamba, ulawulo lofikelelo, ulawulo lwekhonkco lonikezo, ulawulo lweempahla, ukugcinwa kunye nolawulo lwamalungiselelo, ulawulo lwemfuyo njalo njalo.